Author: lu bo | 7:56 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
(21) Wrong : You should not to smoke. Right : You should not smoke. ခင်ဗျား ဆေးလိပ် မသောက်သင့်ဘူး .
Modal verb နဲ့ Main verb နဲ့ကြားမှာ preposition မရှိရပါဘူး ၊ အငြင်းအတွက် no တို့ not တို့ကတော့ helping verb နောက်က ကပ်ထည့်ရမှာပေါ့နော် ဒါကတော့ သိကြာပြီးသားပဲလေ ။
........................ (22) Wrong : Do you likeaglass of wine? Right : Would you likeaglass of wine? ၀ိုင်တစ်ခွက်လောက် သောက်ပါလား .
Do you like က ကြိုက်ပါသလားလို့ မေးတာ ၊ ၀ိုင်ကို ကြိုက်ပါသလား ဆိုလျှင် Do you like wine? ဒါပဲရေးပါမယ် ။ ၀ိုင်တစ်ခွက် ကြိုက်ပါသလားလို့ မမေးပါဘူး
။ Would you like .. က မေးတာမဟုတ်ဘူး ၊ တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်ပါလားလို့ အဆိုပြုတာဖြစ်ပါတယ် ၊ “ပါလား” လို့ပဲ ယူရပါမယ် ၊ ဒီဝါကျမှာ verb မပါတော့ ဖြည့်ပြီး နားလည်ရပါမယ် Would you like (to drink)aglass of wine? ၀ိုင်တစ်ခွက်လောက် သောက်ပါလား.. . Would you like ကို ဖိတ်ကြားတာမှာလည်း သုံးသေးတယ် Would you like to join us for dinner tonight? ဒီနေ့ည ကျနော်တို့နဲ့ ညစာ အတူတူ စားပါလား .................................. (23) Wrong : There is seven girls in the class. Right : There are seven girls in the class. အတန်းထဲမှာ မိန်းကလေး ခုနှစ်ယောက် ရှိပါတယ် .
There is/there are ပုံစံမှာ subject ဟာ V-be နောက်မှာရှိပါတယ် ၊ နောက်က Subject နဲ့ အနည်းအများ ညီအောင် ညှိရပါတယ် ။ seven girls ဆိုတော့ are ပဲ ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော ။ There is / there are ပုံစံကို “တစ်နေရာမှာ တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာ အလေးပေးပြောဖို့” သုံးပါတယ် ။ There is, It is ပုံစံတွေမှာ There တို့ It တို့ဟာ အဓိပ္ပါယ်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး ၀ါကျပုံစံအတွက်
အပိုထည့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ There are seven girls in the class. ကနေ there ကိုဖြုတ် Sub နဲ့ verb ကို ရိုးရိုးဝါကျပုံစံအတိုင်း ပြန်ထားလျှင် Seven girls are in the class. လို့ ရမယ် ၊ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်တော့ အတူတူပါပဲ
။ Sub နဲ့ verb အနည်းအများ ညီအောင် ညှိဖို့ ပိုပြီး မြင်သာပါတယ် ။ ....................................... (24) Wrong : I didn’t meet nobody. Right : I didn’t meet anybody. ကျနော် ဘယ်သူနဲ့မှ မတွေ့ဆုံခဲ့ပါဘူး . ပထမ၀ါကျမှာ don’t နဲ့ nobody အငြင်းနှစ်ခု ထပ်နေပါတယ် ၊ အငြင်း နှစ်ခုထပ်နေလျှင် အငြင်းအဓိပ္ပါယ် မထွက်ပါဘူး ........................................... (25) Wrong My flight departs in 5:00 am. Right My flight departs at 5:00 am. ကျနော့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်က မနက် ၅ နာရီမှာ ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပါတယ် .5နာရီဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ အချိန်ကြောင့် at ကိုရွေးရတာပါ .................................................... ကဲ ဒါလေးစမ်းကြည့်ပါဦး ပွတ်သီကပ်သီလေး ၊ ပွတ်ကာသီကားလေး ပဲ ပြင်ရမှာနော် We waited one andahalf hour. ... မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့